खोप निर्यातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई फ्रान्सको आग्रह - VOICE OF NEPAL
२६ बैशाख २०७८, आईतवार ०७:१०
फ्रान्सले कोरोना भ्याक्सिन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन र उपचार सामग्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेकाे हाे ।
युरोप र अमेरिकामा विभिन्न चरणमा देखा परेको कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको पनि बताएकाे एएफपीले जनाएको छ ।
जान्नुहोस् १८ आश्चर्यजनक तथ्य जुन ताजमहल संग सम्बन्धित छन् !
रामदेवले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने !
बेलायतले गरिब देशहरुलाई १० करोड खोप दिने
अफ्रिकामा एक महिलाले जन्माइन् एकै पटक १० बच्चा
फ्रान्सका राष्ट्रपतिमाथि सार्वजनिक स्थानमा नागरिकको थप्पड !
जर्मनीले नेपाललाई पठायो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री
बेलायती राजकुमार ह्यारी बने दोस्रो सन्तानको पिता
फेसबुकले ट्रम्पललाई दुईवर्षे प्रतिबन्ध